Cabsida laga qabo cudurka CronaVirus inuu ku faafo dalka Soomaaliya oo sii korortay (La soco sababaha) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Cabsida laga qabo cudurka CronaVirus inuu ku faafo dalka Soomaaliya oo sii...
Waxaa sii kordhaya walaaca laga qabo in Soomaaliya uu ku faafo cudurka halista ah ee CronaVirus, kaddib markii Dowladda federaalka ay shaacisay in ilaa afar dhallinyaro Soomaali ah kana yimid dalalka uu ka jiro cudurkaasi ka soo degeen garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Fowsiyo Abiikar Nuur oo khudbad ka jeedineysay Kulan looga hadlayay xaaladda cudurka CronaVirus iyo sidii sare loogu qaadi lahaa ololaha looga hortegayo inuu dalka ku faafo ayaa sheegtay in 10-kii bishan garoonka diyaaradaha Muqdisho laga qabtay arday Soomaali ah oo ka yimid dalka Shiinaha, halka 11-kii bishanna saddex dhallinyaro ah garoonkaasi ka soo degeen.
Afartaan qof oo dhammaantood dhallinyaro ah ayaa looga shakiyay caabuqa cudurka CronaVirus, waxayna wasiirad Fowsiyo sheegtay in la karantiilay bacdamaa ay ka yimaadeen dalal uu ka jiro cudurkaasi.
“Dhallinyarada baaritaanadii lagu sameeyay ilaa iyo hadda ma caddeynin inay qabaan cudurka CronaVirus, hase yeeshee maadaama cudurkaan awood u leeyahay inuu muddo badan ku jirayo jirka qofka uu ku dhaco ayaan gelinay karantiil” ayay tiri Wasiirka caafimaadka.
Wasiiradda ayaa sheegtay in dhallinyarada looga shakiyay inay qabaan cudurka CronaCirus la sii heynayo muddo 14-maalmood ah si loo hubiyo xaaladooda caafimaad haddii laga waayana laga saarayo karantiilka la geliyay.
Fowsiyo Abiilkar Nuur ayaa sheegtay in ujeedada ay u karantiishay dhallinyarada muwaadiniinta ah aanay ahayn mid ay uga horjeedo inay dalkooda yimaadaan, hase yeeshee ujeedadoodu tahay in la adkeeyo bed qabka dadka ka imaanaya dalka dibadiisa iyo kahortagga faafitaanka cudurka.
Dowladda Soomaaliya ayaa kordhisay inay xoojineyso ololaheeda ay uga hortageyso faafitaanka cudurka CronaVirus, isla markaana khubarro caafimaad geysay garoomada diyaaradaha iyo dekedaha dalka si loola socdo xaaladda caafimaad dadka dalka soo gelaya, hase yeeshee in laba maalin oo isku xigta garoonka diyaaradaha Muqdisho laga helo dad looga shakiyay cudurkaasi ayaa muujineysa inuu weli jiro gaabis aad u weyn.
Halista cudurka CronaVirus oo markii ugu horeysay sanadkaan 2020-ka dillaacay magaalada Wuhan ee wadanka Shiinaha ayaa si degdeg ah ugu faafay in ka badan 120-dal oo ay ka mid yihiin dowladaha caalamka ugu awooda badan sida Mareykanka, Ingiriiska, Iiraan, Talyaaniga iyo wadamo kale, iyadoo warbaahinta caalamiga ah maalin kasta baahiyaan kiisaska dadka uu ku dhacay cudurkaasi oo noqday mid saf mar ah.
Ma badna rajada laga qabo in dalka Soomaaliya oo ka soo kabanaya dagaallo sokeeye iyo burbur ku dhacay 30-sano kaddib in Dowladda dhexe awood u leedahay xakameynta cudurkaasi, hase yeeshee Wasiirad Fowsiyo ayaa hoosta ka xariiqday inay bilaabeen sidii ay arrintaasi iskaashi ugala sameyn lahaayeen dowladaha daneeya Soomaaliya iyo hay’adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka.
Guud ahaan dalalka dhaca geeska Afrika oo saameysay cabsida laga qabo cudurka CronaVirus ayaa durba soo ifbaxeysa, waxayna wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya dalka Itoobiya sheegayaan in la karantiilay qofkii ugu horeeyay ee uu ku dhacay cudurkaasi, halka dowladaha Jabuuti iyo Kenya bilaabeen dadaallo looga gaashaamanayo in cudurka CronaVirus ku faafo dalalkooda.
DIYAARIYE: Jabriil Max’ud (Jabra-Shaaciye)